प्रदेश एकका तीन स्थानमा तयार भयो ४ सय ४० बेडको क्वारेन्टाइन – KhabarPurwanchal
प्रदेश एकका तीन स्थानमा तयार भयो ४ सय ४० बेडको क्वारेन्टाइन
खबर पूर्वाञ्चल, ६ चैत्र २०७६, बिहीबार १६:५१
विराटनगर । विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणलाई रोक्न प्रदेश १ को तीन जिल्लामा ४ सय ४० बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ ।
मोरङ, सुनसरी र झापाको विभिन्न तीन स्थानमा ४ सय ४० बेडको क्वारेन्टाइन तयार भएको हो । नेपाली सेनाको टोलीले बु्धबारबाट सुरु गरी बिहीबार क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णायक अनुसार मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका – ५ टाँडीमा २ सय बेडको क्वारेन्टाइन बिहीबार निर्माण भएको नेपाली सेना पूर्वी पृतना इटहरीले जनाएको छ । यसअघि उदयपुरको कटारीमा २ सय र झापाको भद्रपुर नगरपालिका १० कलवलगुढीमा ४० बेडको क्वारेन्टाइन तयार भइसकेको छ ।
टाँडीस्थित नेपाली सेनाको सुर्यदल गणको परिसरभित्र करिव ४ विघा क्षेत्रफलमा यो क्वारेन्टाइनस्थल निर्माण भएको हो । संक्रमण हुन नदिनको लागि न्युनतम स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्नेगरी निर्माण गरिएको क्वारेन्टाईनमा प्रत्येक पालभित्र २÷२ जना अट्ने वेड राखिएको छ । यस्तै पालको दुरी ५ मिटरको फरकमा रहेको छ । २५ ट्वाईलेट÷वाथरुमसमेत रहेको क्वारेन्टाईनसँगै झापाको कल्वलगढी भद्रपुरस्थित ग्रामिण कृषि परिक्षण तालिम केन्द्रमा ४० वेड र उदयपुरको बेलस्रोतमा २ सय वेडको क्वारेन्टाईन निर्माण गरिएको नेपाली सेनाको नं. २ बाहिनी अड्डाका वाहिनीपति सहायक रथी यमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरका सेनानी नारायण सुवेदीका क्वारेन्टाइनमा मोवाइल चार्ज, वत्ती, पंखालगायतका आवश्यक सामाग्री पनि राखिएको छ । त्यसमा खानेपानी पनि सबैका लागि अलग–अलग व्यवस्था छ ।
नेपाली सेनाले तयार पारेको चिकित्सकको टोली कोरोना आशंका गरिएका संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा परिचालन हुने पूर्वी पृतना सैनिक अस्पतालकी सेनानी डा. सरिता केसीले जानकारी दिए ।
नेपाली सेना पूर्वी पृतना इटहरीका अनुसार तत्कालको लागि २ सय बेड रहने बनाएको र आवश्यकता अनुसार थप गरिनेछ ।
डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनस्थल बनाएको जानकारी दिँदै सेनाले त्यसमा प्राबिधिक र अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल थापाले सरकारको निर्णय अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण भएको जानकारी दिए ।
क्वारेन्टाइनमा अब औषधि, अन्य प्राबिधिक सामान र स्वास्थ्यकर्मी खटाउन भने बाँकी रहेको छ । प्रदेश सरकारले संक्रमणको सूचना तत्काल प्राप्त गर्नेदेखि परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र औषधोपचार गर्नेसम्मका सबै र व्यवस्थापनको योजना तयार पारेको थियो । प्रदेश सरकारको टाँडीमा एक हजार र श्रीलंका टापुमा एक हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।